Kafiin na-ebute ọrịa kansa prostate? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Kọfị prostate cancer - ihe ngwọta na
Kafiin na-ebute ọrịa kansa prostate?
Kọfị na ọrịa kansa prostate
Nnyocha na-egosi nakọfịoriri na-adịghị metụtara na ihe ize ndụ nkeọrịa cancer. Ihe nyocha nke 6 ndi otunaIhe nyocha nke 5 achọpụtaghị mmetụta ọ bụlakọfịoriri na ihe ize ndụ nke na-emepe emepeọrịa cancerOgbe 71.
Ọ BR YOU na Ọ Dị Gị ka ọtụtụ, ị na-a DRụkwa ihe ọ ORụ TWOụ ma ọ bụ kọfị abụọ. CALIFORNIA NA-AH AT AKW AKWỌ AKW WARKWỌ AKW WARKWỌ NA-AH ON N'COLỌ AKW CKWỌ CHEMICAL MGBE A NA-EME kọfị. STEPHEN PRESCOTT, Onye isi ala, nke ụlọ ọrụ OKLAHOMA MESALCH RESEARCH.
Ekele dịrị gị nke ukwuu Ebe a, anyị na-ekele ya, Ọ B IFR THIS na nke a nwere ụgha, onye ọ bụla na-ekwu okwu. KEDU IHE I KWURU? >> M KWESINKR CO YOURLỌ COL CO kọfị ma nwee obi ụtọ na ya. IHE KWESOBR TH KWES OFR OF THELỌ AH THER THE NKE ỌR THEA AHU.
linggba ígwè na-arụ ọrụ erectile
B HAVEGH HAVE IHE ỌB ANR THAT P CANTA IBU ỌR CAN. Mgbe ahụ ị hapụwo ogologo oge California, ịdọ aka ná ntị ndị mmadụ. Ka ihe ọ bụla ghara imebi. >> Ọ B ONL naanị na ọnụ ọgụgụ? Ọ NA-EME N’AKA ỌB THATR THAT NA-EME DIF iche. >> Otu ihe a na-eme na iwu obodo ochichi obodo nke nwere ike ibute oria.
NTI ya mere enwere akara ngosi. ANY WE NA-EKWUPU Ihe niile anyị na-eche banyere ihe niile gbasara KÜstin NS. >> General nkwupụta na kọfị na ihe ndị ọzọ a na-kọwaa.
Ọ B IFR TH na e nwee ọdịiche, anyị ahụwo ya ugbu a. ANY CO nwere ike ịhụ obere mmetụta nke ụtọ na ọrịa na-efe efe ga-abụ nnukwu. ANY CAN nwere ike ijide n'aka na ọ. >> Ọ B IFR WE na anyị amata kọfị agaghị egbu anyị, ọ dị mma maka anyị? KA Ọ B J D J MKPA? >> E nwere n'aka na enwere mmụta ọgwụ na-egosiputa na kọfị enwetawo uru.
Kpọọ ozugbo. Agaghị m agwa gị ka ị INKụọ kọfị maka ahụike gị. Ahụike gị nwere ike ịbụ onye na-enweghị isi. >> B AM EGO BU EGO NA ANY WE NA-EKWU? >> O bidoro metụta ụra m.
CAFFEINE NA-EME KA GI KWU. Ọ B IFR YOU na DR DRụọ ỌU OF OF, U nwere ike ịINKụ otu n'ime ihe ndị a dị ka ụra gị >> ANY HAVE nwere ajụjụ ụfọdụ site na Facebook, MA EFỌD S NA-EKWU Ọ B IFR I NA M ENWEBFGH CO EGO M KWES WILLR I M ga-emerụ ndị ọzọ. GYNY B DOR YOU NA Nanị Ahụmahụ ahụ? Kọfị adịwo ogologo oge na unu kpuchie kọfị afọ niile a. >> ACRYLAMIDE B W MGBE NA-ERI Nri Dị Iche.
Ọ bụ ihe niile na protein na carboHYDRATES. ND PEOPLE MMAD ARE NA-ADONG AKWONGSONG AKW THEKWỌ AH THE NA-AHAL NA AH HERAL NKE ỌR NA NA-AHIA NA NKE N ’IWU Ọ B THAT N’ THB ISR THIS A. >> Echere m na anyị nile na-eche A UGBU A na ndị dị ugbu a.
STEPHEN PRESCOTT Ekele gị.
Kọfị ọ dị njọ na prostate gị?
Caffeine nwere ike ịkpasu iwe maprostatenaiheeriri afo. Otu nnyocha chọpụtara na ụmụ nwoke ndị na-a 23ụ 234 mg ma ọ bụ karịa caffeine kwa ụbọchị nwere pasent 72 nwere ike ịnwe urinary na-adịghị mma ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke na-a drankụ mmanyaiheobere caffeine.
Aga m enye gị njikọ maka edemede a na njedebe nke isiokwu a ka ị wee hụ ya niile. Nke a dugara n’ọtụtụ ajụjụ dị iche iche, mana nke a kwughachiri ugboro ole na ole bụ, “caffeine ọ na-eme ka nrụpụta dị ike? Ọ Dị Mma Maka Erectile Dysfunction Anụla m ọmụmụ ihe kwuru na nke a bụ ikpe? ”Mmeghachi omume mbụ m na echiche m bụ,“ Mba, ọ bụghị! Ekwuru m n'ụzọ doro anya n'isiokwu ahụ ihe kpatara na ọ bụghị, ọ dị njọ na homonụ gị ma si otú a nwee ike ibute nrụrụ erectile. ”Ma achọghị m ịgbachi nkịtị n’ajụjụ ahụ.
O doro anya na amaghị m ihe niile ma achọrọ m ịmụ ihe dị ka o kwere mee. Dị ka ekwuola, ọwa a bụ maka gị na mkpa gị. N'ihi ya, m gwuru ala karị
Achọpụtara m ihe ọmụmụ1 na 2015 nke chọpụtara na ụmụ nwoke ndị na-a drankụ ihe dị ka 170-375 milligrams (mg) nke caffeine kwa ụbọchị nwere ike ịkọ na nrụrụ erectile (ED) karịa ndị mere nke a (nke ahụ bụ ihe dị ka iko kọfị 2-3) ). Agbanyeghị, ndị nyocha ahụ amaghị ihe kpatara ya, mana ha nwere usoro mmụta. Ha dere na 'usoro ihe eji eme ka ihe banyere ndu bu na caffeine na ebute otutu ogwu ogwu'.
Nke a na-eduga na izu ike nke akwara penile na anụ ahụ na-akwọ mụrụmụrụ nke na-edozi ahụ oghere ma si otú ahụ na-eme ka ọbara na-asọba na amụ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, akwara akwara na akwara ndị na-akwọ mụrụmụrụ na-atụrụ ndụ, ọbara na-aga nke ọma, na ‘oghere ọzịza’ dị na mkpị nke na-eso eme ka nrụpụta na-adịkwu mfe jupụtara n’ọbara. Ọ dị mma, nke ahụ dị ka tiori mara mma.
Ndị nchọpụta ahụ chọpụtakwara na ha “enweghị ike ịhụ njikọ n’etiti caffeine na mmụba ọbara na-abawanye”. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ọnwụnwa ahụike, enwere ntụpọ na atụmatụ adịghị mma. Enweela m omimi miri emi na nkwupụta nke 'ọbara' na enwere ụfọdụ ọmụmụ na-egosi mmụba ọbara na-arịwanye elu na ụbụrụ n'ihi caffeine nwere mmetụta ọzọ, na-akpata vasoconstriction na ya mere ọbara na-adịghị mma.3 Ya mere nsonaazụ ọma niile mechara bụrụ nke a jụrụ.
Isi okwu bụ na ọ dịghị nke ọ bụla pụtara ihe ọ bụla. Dịka e kwuru na edemede m mbụ, ihe na-akpali akpali dị ka caffeine na-akpata spikes na homonụ nrụgide dị ka cortisol na adrenaline / epinephrine ọkwa nke na-eme ka ogo testosterone dị ala na nke a ga-eduga na mbelata nke nrụpụta. Tohapụ ikwu na caffeine na-emekwa ka nchekasị dịkwuo elu, nke na-ebelata arụmọrụ.
Ihe mgbaru ọsọ gị bụ na ịchọrọ mgbe niile iji meziwanye homonụ gị, ọ bụ ya! Mkpụrụ ndụ kachasị mma na nguzozi bụ oge kachasị mma, ngwọta sitere n'okike maka ahụike na nrụpụta. Ọ bụ echiche dị mfe, mana mgbagwoju anya iji mejuputa ya. N'okpuru isiokwu a, enwere m njikọ abụọ dị mkpa ị kwesịrị ịlele taa.
Otu kwesịrị ekwesị maka isiokwu mbụ maka onye ọ bụla na-ere ngwaahịa caffeine dị ka kọfị, ihe ọ energyụ energyụ ike, ihe mgbatị na-aga n'ihu ma ọ bụ ngwaahịa ndị yiri ya. Nke ọzọ bụ ihe nyocha nke nyocha na-enyere aka melite homonụ gị, mee ka ogo testosterone dị elu, nke na-eduga n'ịkwa arụ nke ọma na agụụ mmekọahụ - n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ mmetụta uche. Ihe ahụ masịrị gị? See bọtịnụ dị ka.
Daalụ maka ịge ntị ma nwee ọ happyụ ụbọchị ahụike!
Kedu nri nwere ike igbu ọrịa cancer?
Enweghị onye ọ bụlanrima ọ bụ uzommeputa nanwere ikeozugbogbue ọrịa cancersel. Fọdụnri nanwere ike inye aka naọrịa cancermgbake na nlọghachi mgbochi gụnyerenrinwere lycopene, agwa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii, cruciferousakwụkwọ nrina mkpụrụ osisi dị ka kranberị, strawberries, blueberries na pọmigranet.Mar 31 2021
(egwu dị egwu) - Achọrọ m idozi nsogbu. Naanị m na-achọ ịbanye n'ime ha ma ọ bụrụ na m mehie 10 nke ahụ dị mma, m ga-ewepụ ihe mmejọ 10 ahụ n'ụzọ ma mesịa chọpụta ihe ziri ezi ịme. Abụ m prọfesọ nke injinịa na UC Berkeley Ọ na-atọ m ụtọ ịme egwuregwu.
M na-agba ọsọ ebe niile. Anaghị m anọdụ ala n'ụgbọala. Mụ na nwa m nwoke malitere ịkụ obere bezbọl mgbe m dị afọ iri ma ọ bụ iri na otu.
Achọpụtara m na m nwere kansa na November 2014 mgbe ogologo oge nke otu afọ na ọkara nke ahụ erughị ala mgbe ogologo oge nke otu afọ na ọkara Afọ erughị ala na n'otu oge m mere obere eserese na ọ laghachiri ngwa ngwa . Echetara m iche echiche, na ọnụego a, ihe m na-ekwu, agaghị m adị ndụ n'ime ọnwa atọ. Biopsy ahụ gosipụtara ọrịa cancer zuru oke na ọkwa dị elu na prostate.
Ọ gbasawo na akụkụ lymph na ụfọdụ akụkụ akwara na eriri m na ọkpụkpụ obi, malitere ọgwụgwọ hormone n'echi ya wee malite ozugbo chemotherapy - Mgbe anyị chọpụtara na ọ bụ nchoputa nke Andy, anyị maara na ọ dị njọ. Ihe mbu, achoputara m dika onye nzuzu, enwere akwukwo? Echere m na ọnọdụ nke ọrịa ahụ bụ na e nweghị ihe ọ bụla ebe a. - Mgbe ahụ ndị enyi anyị na-atụ aro anyị na MD Anderson na Houston.
Johanna mere ọtụtụ ihe dị mkpa iji mee nke ahụ. Know mara, echere m na ọ bụrụ na Johanna anọghị ebe ahụ inyere m aka site na ngwa agha, yana ihe ndị ọzọ, ọ na-eyi egwu. Mana ndị mmadụ gbara anyị ume na anyị ga-aga otu oge.
Achọghị m ịga njem ma ọlị. Ọ na - eme m ka ọ dị m ka m ji ihe akpọrọ ihe ma na - eme ihe niile nwere ike. Arụ m ọrụ ebe ahụ na June 2015 wee malite ikpe ahụike m na-erughị otu afọ mgbe nyochachara m. - Andy na-anata ọgwụgwọ a na-akpọ asipilimumab ma ọ bụ Yervoy.
Ọ bụ ọgwụ nke na - agbaji brek nwa oge na sel T, nke bụ sel ndị na - enweghị ike na - enyere aka n'ịlụso ọrịa kansa ọgụ. - Ya mere, nke a bụ nhọrọ a nke ihe na-atọ ụtọ. Ee, ọ dịkwa ntakịrị ụjọ n'ihi na enwere mmetụta ndị a niile, mana anyị niile nọ ebe ahụ.
Naanị anyị chọrọ ịga n'ihu ma mee ka ọ mee - ekwesịrị m ịnye m ụzọ anọ nke ipilimumab kwa izu atọ. Emechara m nweta ọgwụgwọ atọ - Andy mepụtara otu n'ime nsonaazụ kachasị emetụta ọgwụ mgbochi a ebe mkpụrụ ndụ na-alụ ọgụ na-awakpo akpụkpọ ya n'ezie ma mee ka ọkụ ọkụ. Ka osila dị, Andy nwere otu ihe kachasị mma anyị hụrụla na ọrịa prostate - Dr.
Subudhi kwuru, ị maara, usoro ahụ ji alụso ọrịa gị ọgụ dị mma, anyị agaghị enweta usoro nke anọ ahụ. Ma ha rụrụ ụka na ọ bụghị ihe ọhụrụ. Mụtara otu esi eme dosing. - Andy na-emegide nsogbu niile.
Maka ndị ọrịa dịka Andy, a ga-atụle nlanarị etiti n'etiti afọ abụọ ma ọ bụ anọ ma ekwenyere m na ọmụmụ a gbanwere amụma ahụ nke ọma. Otu afọ mgbe ọ malitere ọgwụgwọ ya, o zitere m foto ya ma kwuo, 'Aga m apụ maka otu afọ wee kọọrọ m ndị ọzọ' site na otu anyị wee kwuo na ọ bụ ya mere anyị ji eme ihe anyị na-eme. - Iso na-amuta ihe nyere m ezigbo olile anya.
Immunotherapy bụ otu afọ na ọkara ka e mesịrị ma enwere m nnukwu obi. Anọ m na-arụsi ọrụ ike, ọ bụ ezie na enwere m obere ọganihu na PSAI m, na-enwe ekele maka isonye na ọmụmụ ihe a, na m ga-eme ọmụmụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na m nwere ohere.- throughga site na immunotherapy na enweghị ụdị ọgwụgwọ ọ bụla n'ihi na afọ gara aga abụwo nnukwu mmeri nye m.
Nke ahụ bụ olileanya ọzọ dị ebube. Enwere ọganihu oge niile. Achọpụtara m na ọ dị ịtụnanya etu ihe si agbanwe ngwa ngwa. - Immunotherapy ga-abụ ọgwụgwọ ọhụrụ na-adịgide adịgide maka kansa.
Nyere na Cancer Research Institute bụ isi ihe mgbaru ọsọ bụ ịbawanye ego na nghọta nke usoro ọgwụgwọ. Ọ dị ka ọmarịcha ihe ga-emecha gbanwee ọtụtụ ndụ ndị mmadụ. (egwu dị egwu)
Kọfị ọ na-eme ka ọkwa PSA belata?
Nwere ike ị alcoholụ mmanya ma ọ bụkọfịoriri skew utịp? Mmanya na ihe ọ drinksụ notụ caffeinated abụghị ntọala dị egwu maka ọrịa kansa prostate ma ọ gaghị emetụtaPSA ọkwa.Sep 4 2020
Ya mere, ka anyị tụlee ihe n'azụ prostate buru ibu nke nwere ike igbochi urination gị. Ka ụmụ nwoke na-etolite, prostate ha na-ebuwanye ibu ma na-ele anya na ebe prostate dị. Urinary eriri afo Mgbe ị na-ebuwanye ibu prostate, tub a na-emechi ma ikike urinate gị adịghị arụ ọrụ.
Dọkịta ahụ ga-edepụta ọgwụ ụfọdụ dịka Flomax, ọgwụ nje, na ikekwe ị ga-eme nyocha ọbara ma hụ gị n'ime ọnwa isii mana ajụjụ m bụ ihe na-eme ka prostate gbasaa. Ọ bụrụ na ị lelee homonụ gị niile, a ga-ekewa ha ụzọ abụọ dị iche iche otu ụdị a na-akpọ anabolic na ụdị nke ọzọ ga-abụ catabolic ugbu a, anabolic nwere ike ịme ihe, ihe catabolic pụtara ịkụda ụfọdụ enzymes ndị dị na nri ha Ihe nrịba ama nke ụlọ na-agbaji amino acid, fatty acids, glucose wdg wee nwee homonụ anabolic niile na-abanye ma were ihe mgbochi ụlọ ndị a wee mee anụ ahụ ha.
Mgbe prostate na-ebuwanye oke, o doro anya na ị nwere ihe anabolic a na-aga nke ọma, ọ bụrụ na anyị lelee homonụ anabolic niile, anyị nwere prolactin ma eleghị anya ị nụla banyere prolactin na ụmụ nwanyị na-enye nwa ara, mana ụmụ nwoke nwere prolactin kwa ma oburu na prolactin di oke elu o gha eme ka onu ogugu nke prostate di na estrogen n’onwe ya nwere ike ime ka onu ogugu nke prostate di na estrogen na - emekwa ka mgbasa nke prolactin dịkwuo elu ka ị nwee homonụ ndị ọzọ dịka DHT, ụdị dị ike nke testosterone na androgens Cortisol growth hormone igf number one nke dị ka mmụba nke uto hormone ọ na-emepụta site na imeju ọ na-akpali site na uto hormone ga-eme ka prostate buru ibu ma ị nwere Pro Gesterone na Insulin nke bụ nnukwu ọgwụ anabolic . Ya mere, lee anya na nri ma ọ bụ ihe nwere ọtụtụ homonụ ndị a nke ị nwere ike iri na oge Milk bụ ihe dị ike anabolic nke emere na chiiz. Yogurt kefir na mmiri ara ehi nwere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke homonụ anabolic a.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịmị mamịrị ma ọ bụ ịbawanye prostate gị ị ga - achọ 100% ịkwụsị mmiri ara ehi na ngwaahịa mmiri ara ehi yabụ ọ bụrụ na prostate na-ebuwanye ibu ma ọ bụ na ị nwere nsogbu ịmị mamịrị, ịkwesịrị iwepụ shuga ma gaa na usoro ketogeniki. Ọ bụrụ na ị bụ ọhụụ na ọwa m, m ga - agbakwunye njikọ n'okpuru ma anyị nwere estrogen, ọ dị mma ka estrogen nwere ike isi n'ọtụtụ ebe dị iche iche, soy bụ ezigbo estrogen. Yabụ ọ bụrụ na ị rie ihe dịka mmiri ara ehi soy ma ọ bụ soy protein solo maka protein, ma eleghị anya, ị ga-eri nri ị ga-eri ma ọ bụ na ị gaghị eri, mgbe ị na-eri nri nri, naanị ihe ị nwere bụ akwụkwọ nri azụmaahịa ma ọ bụ nri dị elu na kemịkal nke na-e estomi estrogen.
Nke a nwere ike bụrụ nnukwu ihe na - eme ka prostate gị baa ụba. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ewere ọgwụ ndị sitere n'okike maka prostate dị ka nnu nnu na n'ihi na nnu palmetto na-egbochi ụfọdụ enzyme nke na-agbanwekarị testosterone n'ụdị testosterone siri ike nke akpọrọ DHT nke nwere ike ime ka prostate ahụ buru ibu, ihe soy ọ gaghị arụ ọrụ yabụ ana m akwado mmiri ara ehi ahụ ngwaahịa ebipụ mkpụrụ osisi zinc na lycopene ugbu a, lycopene nwekwara ụfọdụ nnukwu nnyocha nke nwere ike inye aka belata shuga na nke ahụ ga-adị elu na tomato, yabụ tomato ga-abụ ezigbo nri ma ọ bụrụ na ị gbasaa prostate. Yabụ ọ bụrụ na ị nọ na nri ma ọ bụ chọọ ime onye nwere prostate buru ibu, ọ bụghị naanị keto ahụike na ibu ọnụ oge niile, mana m ga-eri ọtụtụ akwụkwọ nri na-egbu mmụọ ọkachasị n'ihi na - lekwasị anya ebe a iji zere gburugburu gị, mana kedu maka ịkwalite mgbochi gị sistemụ na-efu usoro a na-egosi gị etu esi agbachitere onwe gị yana otu esi anabata ma guzogide gburugburu gị nke kachasị mma site na ịkwalite usoro mgbochi gị nke m tinyere njikọ na ala nke nkọwa ahụ na ala aka nri lelee ya ma debanye aha taa
Nwere ike ibi afọ 20 na ọrịa cancer prostate?
Menmụ nwoke nwere etuto Gleason 7 na 8 ruo 10 achọpụtara ịbụ ndị nọ n'ihe ize ndụ nke ịnwụ n'ihiọrịa cancer. MgbeAfọ iri abụọ, nnipa 3 kosi 217 na wɔbae. Withmụ nwoke ndị nwere oke oke ogo nwere nsogbu dị n'etitiọrịa cancerịga n'ihu mgbeAfọ iri abụọnke ntinye.
Beer ọ dị njọ maka prostate?
Nnyocha nke metụtara ụmụ nwoke 3,927 na Greater Montreal chọpụtara na ị drinkingụ abiyakwa ụbọchị na ogologo oge metụtara ihe egwu dị egwugbueakansa.Sep 5 2018
Ihe mmega ahụ dị mma maka prostate?
Dị iche iche nkeomumenwere ikena-enye akan'ihi na ndị ikom nagbueansogbu ma ọ bụ OAB. Kegelomumenwere ike iwusi ma zụọ akwara pelvic gị iji nyere aka ịchịkwa mmamịrị.Mmegadị ka ịga ije, ịgba mwe mwe mmiri, igwu mmiri, na ịkụ tenis bụkwabara uru.
Unere dị mma maka ọrịa prostate?
Nsonaazụ ndị a na-egosi na wepụ methanol nkeunerebee nwere ike igbochi 5alpha-reductase ma nwee ikebara uruna ọgwụgwọ nke benigngbueahyperplasia.Septemba 7 2009
ọ kwesịrị ka m meghaa tupu m lakpuo
Mmanya na-acha uhie uhie ọ dị mma maka prostate?
A ọhụrụ ọmụmụ na-egosi ndị ikom ndị na-a drinkụ iko anọ ma ọ bụ karịammanya uhiekwa izu nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% obere ihe ize ndụgbueacancer karịa ndị na-a -ụghị mmanya. Na mgbakwunye, ndị nchọpụta chọpụtara nammanya uhienchedo mmetụta egosi na ọbụna ike megide ndị kasị dị ize ndụ ma na-eme ihe ike ike ụdị nkegbueakansa.Sep 23 2004
Kedu ka ọrịa kansa prostate si egbu gị n'ikpeazụ?
Ọtụtụkansamkpụrụ ndụ nke na-akwụsị inwe ihe nagbueanwụọ. Ma mgbe ụfọdụ, ha na-agbasa n’akụkụ ndị ọzọ ma malite etuto ọhụrụ. Nke di eluọrịa cancerna-abanyekarị na oghere lymph ma ọ bụ ọkpụkpụ tupu ọ gbasaa na akụkụ ndị ọzọ. Ọ na-agbasakarị na ngụgụ, imeju, ma ọ bụ ụbụrụ.
Onwere onye na - alanu oria cancer prostate nke ano?
Ogbo-4 Ọrịa Cancer(IV)
Nke a bụ nke ikpeazụogbonkeọrịa cancerma na-akọwa atumonanweregbasaa n'akụkụ ndị ọzọ nke ahụ, gụnyere lymph node, akpa ume, imeju, ọkpụkpụ, ma ọ bụ eriri afo. Maka ndị aọrịa cancer, afọ 5lanarịọnụego bụ 29%.
Kedụ ka njikọ kọfị si belata ihe ize ndụ nke ọrịa prostate?
Ndị nnyocha ahụ gbakọrọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 pasent mbelata n'ihe egwu maka iko kọfị kwa ụbọchị. A na-ahụta iri na anọ n'ime ọmụmụ ihe ahụ dị oke mma, na-enwe obere ihe egwu nke enweghị isi, na nnukwu nnwale dị ukwuu na-enye nyocha ahụ nnukwu ume.
Kedu ụdị ọrịa kansa ị ga-enweta site n'ị drinkingụ kọfị?
Ha chọpụtakwara na ị coffeeụ kọfị abụghị ihe kpatara ara nwanyị, pancreas, na ọrịa cancer, ma ọ nwere ike belata ihe ize ndụ nke endometrium uterine na ọrịa cancer imeju. Ekpebiri ihe akaebe ahụ ka ọ bụrụ ezughi oke maka ụdị ọrịa kansa ndị ọzọ.
Ọ dị njọ ị drinkụ otu iko kọfị kwa ụbọchị?
Nnyocha ọzọ e mere maka ị coffeeụ kọfị na-ekwu na iko kọfị anọ ma ọ bụ karịa kwa ụbọchị nwere ike ibute mbelata nke ịlaghachi ọrịa kansa prostate na nrịanrịa nke ọrịa ahụ.